Mac App Store - Ngivela kwaMac | Ngivela kwaMac (Ikhasi 3)
I-Adobe Lightroom isiyatholakala ku-Mac App Store
Ithuluzi le-Adobe Lightroom selitholakala ku-Mac App Store. Okwamanje ingeyokuqala kodwa kulindeleke ukuthi izinhlelo eziningi ze-Adobe zifike
I-Pixelmator Pro ilungiselela ukukhama i-Sidecar ne-Mac Pro entsha
IPixelmator Pro ilungiselela ukukhama iSidecar ne-Mac Pro entsha.Izohleleka ngokuningiliziwe kwi-iPad ne-Apple Pencil.
ICardhop ivuselelwa ku-macOS kuya kungu-1.3 futhi ikhipha inguqulo ye-iOS
ICardhop ivuselelwa ku-macOS kuya kungu-1.3 futhi ikhipha inguqulo ye-iOS. Iletha izifanekiso ezintsha nemisebenzi yokwakha amaqembu ahlakaniphile.
IMicrosoft To-Do ekugcineni ifika kwi-Mac App Store ukuze incintisane ngokuqinile emkhakheni wokukhiqiza
IMicrosoft To-Do, umphathi wemisebenzi kaMicrosoft, ifike ngokusemthethweni kwi-macOS futhi itholakala mahhala kwa-App Store. Thola!
I-Logic Pro X ivuselelwa yi-Mac Pro entsha
Uhlobo olusha lweLogic Pro X lunamandla amakhulu kunakuqala futhi ligxile ngqo ekusebenziseni ngokugcwele izimfanelo zeMac Pro
IMovie ibuyekezelwa enguqulweni engu-10.1.2 enezici eziningi ezintsha
Uhlelo lokusebenza lwe-iMovie lubuyekezelwa abasebenzisi be-MacOS ngokuthuthuka okuningana okujabulisayo. Kulokhu, inguqulo 10.1.2 ifinyelelwe
Faka usuku lokuthwebula egameni lefayela lezithombe zakho nge-iSortPhoto
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-iShortPhoto, singakwazi ukuhlela umtapo wethu wezincwadi ngokushesha ngezinsuku zokuthwebula izithombe
I-Affinity Photo ne-Affinity Designer manje iyahambisana nama-eGPU angaphandle
I-Affinity Photo ne-Affinity Designer manje iyahambisana nama-eGPU angaphandle, ngenxa yokuthuthuka kwe-algorithm. Izohambisana nabaqaphi be-HDR / EDR
I-Telegram ivuselelwa ngezindaba zobumfihlo, izinhlelo zokusebenza zewebhu nokuningi
I-Telegram ithuthukisa ubumfihlo babasebenzisi bayo enguqulweni yakamuva ekhishwe yohlelo lwayo lwe-macOS. Le nguqulo entsha isiyatholakala ku-Mac App Store
I-OmniFocus isivele ivumela ukufinyelela kwewebhu njengomphelelisi kuhlelo lokusebenza lwe-macOS
Uhlelo lokusebenza lwe-OmniFocus lwe-iOS ne-MacOS lusanda kwethula insiza entsha yokufinyelela iwebhu
Umdlalo wasepulatifomu u-Yuri uvuselelwa ngokungeza amazinga amasha [I-Giveaway]
Umdlalo wesikhulumi omnandi uYuri, usanda kuvuselelwa ungeza amazinga amasha, okwenza inani eliphelele libe yi-16 futhi wenze kabusha ingoma.
I-Spark ye-Mac ivuselelwa ikuvumela ukuthi ushintshe usayizi wefonti nefonti
Ukuvuselelwa kwakamuva kwe-macOS ekugcineni kusivumela ukuthi sengeze amafonti amasha futhi sishintshe usayizi wefonti.
I-1Password ye-Mac ivuselelwa ngokungeza imisebenzi emisha kusixhumi esibonakalayo esincane
Umphathi wephasiwedi owaziwa kakhulu ku-Apple ecosystem, i-1Password, usanda kuvuselelwa engeza imisebenzi emisha kusixhumi esibonakalayo esincane
Ngalesi sandiso seSafari uzobona ngokushesha ukuthi amavidiyo we-YouTube atholakala ngo-4k
Ngenxa yokwandiswa kwe-4K isandiso se-Safari, sizokwazi ukwazi ngokushesha ukuthi yimaphi amavidiyo we-YouTube ngefomethi engu-4k evela ku-Safari
Isazi Sesitifiketi sisinikeza izifanekiso ezingama-120 zeZwi ngama-euro angu-2,29 kuphela
Isicelo sochwepheshe besitifiketi senza kutholakale isikhathi esilinganiselwe ngaphezu kwezifanekiso ezingama-120 ukudala amadiploma, amakhadi e-ID nobufakazi.
Bheka isimo se-Mac yakho ngohlelo lokusebenza lwe-Instastats
Bheka isimo se-Mac yakho ngohlelo lokusebenza lwe-Instastats. Enguqulweni yakamuva uhlelo lokusebenza lukhulula imemori ye-RAM ngokuzenzakalela
Sebenza ngamafayela e-PDF ngokushesha futhi kalula nge-PDF Plus
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwePDF Plus, singenza imisebenzi elula ngamafayela e-PDF, kufaka phakathi amandla wokungeza ama-watermark.
Dala ama-movie nezethulo ku-Mac yakho nge-Filmwizard
Dala ama-movie nezethulo ku-Mac yakho nge-Filmwizard. Kuphelele ukudala ama-movie ngezikhathi ezithile futhi kumahhala.
Qopha umsebenzi wakho we-Mac ngohlelo olusha lwesikhathi
Qopha umsebenzi wakho we-Mac ngohlelo olusha lwesikhathi. Ikuvumela ukuthi ukale ukusetshenziswa kwefayela, uhlelo lokusebenza noma ifolda ngesitophuwashi.
I-Tweetdeck ivuselelwa ingeza ukusekelwa kwamapholi nama-GIF
Uhlelo lwe-Tweetdeck Mac lusanda kuvuselelwa ukwengeza ukwesekwa okulindelekile kokwenza amavoti nokwengeza amafayela we-GIF.
Dala amaphrezentheshini obuchwepheshe ngezifanekiso ze-Keynote +
Izifanekiso ze-Keynote zisinikeza ngaphezu kwezifanekiso ezingama-80 ukudala noma yiluphi uhlobo lwedokhumende ngemali encane kakhulu.
Ukugcina izingxoxo ku-Telegram Desktop manje kungenzeka ngemuva kokuvuselelwa kokugcina
Uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ngeTelegram selube kubasebenzisi abaningi izindlela zabo zokuxhumana, kepha hhayi kuphela….
Jabulela i-TV ku-Mac yakho nge-TV Streams
Ukusakazwa kwe-TV kungenye yezicelo ezinhle kakhulu zokujabulela okuqukethwe kohlu lwe-m3u ku-Mac.
I-Yoink ivuselelwa ivumela ukusizakala ngokuqhubeka kwekhamera phakathi kweminye imisebenzi
I-Yoink ivuselelwa ivumela ukusizakala nge-Continuity Camera, ivumela ukwabela igama kumafayili angenisiwe nokugcina ifayela ngemuva kokulithumela
Dala ukuhwebelana phakathi kwezithombe ezimbili kufayela le-GIF nge-Flash Transition
Ngenxa yohlelo lokusebenza lweFlash Transition esingalakha kusuka ezithombeni ezimbili, ifayela le-GIF elinomphumela wokuguquka
Ideskithophu Ideskithophu ivuselelwa isivumela ukuthi sishintshe umbhalo ngama-emoji
Ukuvuselelwa okusha kweTelegram Desktop ye-Mac kusivumela ukuthi sishintshe ngokuzenzakalela umbhalo ngama-emoji azenzakalelayo ngendlela esheshayo nelula.
Yakha amakhadi akho ebhizinisi nge-Business Card Composer 5
Ngenxa yohlelo lweBusiness Card Composer 5, ukudala amakhadi ebhizinisi kuyinqubo esheshayo futhi elula ezothatha imizuzu embalwa kuphela.
Finyelela amanethiwekhi wakho wokuxhumana nomphakathi ngokushesha nge-SocialPanel
Ngenxa yohlelo lweSocialPanel, singakwazi ukufinyelela ngokushesha amanethiwekhi wethu wokuxhumana nabantu ngaphandle kokuvula isiphequluli nganoma yisiphi isikhathi.
I-BBEdit ibuyela esitolo sohlelo lokusebenza se-Mac App Store. Uhlelo lokusebenza luya kumodeli yokubhalisile futhi liletha izici ezinhle ezintsha.
ISims 2: Iqoqo Elikhulu litholakala ngama-euro angu-16,99 kuphela
ISims 2: Iqoqo Elikhulu liyatholakala ku-Mac App Store ngama-euro angama-16,99 nje isikhathi esilinganiselwe. Ungaphuthelwa lokhu kunikezwa.
Bhala ama-imeyili ngqo kwi-webmail sibonga ku-Open in Webmail
Bhala ama-imeyili ngqo kwi-webmail ngenxa yokuvula ku-Webmail bese ukhetha i-imeyili yakho ohlwini olude lwezinsizakalo
Ukulahlwa kusivumela ukuthi sigweme izingoma noma abaculi esingabathandi kakhulu ku-Spotify naku-Apple Music
Ngenxa yohlelo lokusebenza olunqatshiwe, ungavimbela izingoma noma amaqembu ongawathandi ukuthi adlalwe ohlwini lwadlalwayo lwe-Spotify ne-Apple Music
Amakhasi, izinombolo kanye ne-Keynote zivuselelwa ngokungeza imisebenzi emisha
I-Apple isanda kukhipha isibuyekezo esisha sazo zonke izinhlelo zokusebenza eziyingxenye ye-iWork suite, lapho sithola khona amakhasi, Izinombolo ne-Keynote
Jabulela amabhiliyade ama-cushion ama-XNUMX ku-Mac yakho nama-Carom Billiards
Uma kukhulunywa ngokujabulela amabhiliyade ama-cushion amathathu avela ku-Mac, singakwenza ngaphandle kwezinkinga ngomdlalo weCarom Billiard
I-Telegram Desktop isivele isivumela ukuthi sidlale amavidiyo ngokusakazwa
Uma kukhulunywa ngokujabulela uhlelo lokusebenza lwemiyalezo yocingo, ku-Mac App Store esinakho ...
I-Final Cut Pro, i-Motion, i-Compressor, ne-iMovie zivuselelwa
I-Final Cut Pro, i-Motion, i-Compressor, ne-iMovie ibuyekezwa ngokulungiswa kwamaphutha nokuguqulwa kwefomethi yevidiyo kufomethi esekelwayo
I-xLine, uhlelo lokusebenza lokwakha amamephu engqondo, iba mahhala ngokuphelele
Uhlelo lokusebenza lokwenza amamephu engqondo, izihlahla zomndeni, imidwebo yomsebenzi ... xLine iba mahhala ngokuphelele enguqulweni yayo ye-iOS ne-MacOS.
Yenza izibalo zezibalo ngendlela elula kakhulu futhi enembile nge-Soulver
Uma ufuna umshini wokubala ohlukile okunikeza isikhombimsebenzisi sokuqhafaza osizwisisayo okokuqala, iSoulver uhlelo lwakho lokusebenza
Gcina okuqukethwe ebhodini lokunamathisela esithombeni ku-PNG, JPEG noma ifomethi ye-PDF nge-Clipboard2Image
Uma sifuna ukuguqula umbhalo ocebile ube isithombe, isithombe se-SVG noma isithombe nje, uhlelo lokusebenza lweClipboard2Imagen luhle.
Iklayenti le-imeyili le-Spark lisivumela ukuthi sidlulisele izimpendulo ze-imeyili
Iklayenti le-imeyili le-macOS, iSpark, lisanda kuvuselelwa ukufaka umsebenzi omusha osivumela ukuthi sidlulisele ama-imeyili kwabanye abantu.
Isikhathi Sonyaka siguqula iMac yethu ibe yisikhungo sezulu
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwesimo sezulu, i-Seasonality Core, singaguqula iMac yethu ibe yisikhungo sezulu esiphelele emakethe.
Ulysses 15 ufika newindi lombhalo ohlukanisiwe nokuphathwa kwamagama asemqoka
Ulysses 15 ufika newindi lombhalo ohlukanisiwe nokuphathwa kwamagama asemqoka phakathi kokunye ukuthuthuka. Singahlola i-Ulysses 15 izinsuku eziyi-14
I-Telegram ivuselelwa ngokungeza ukuzilanda kwakho amavidiyo nezinye izindaba
Uhlobo olusha lohlelo lokusebenza lwemiyalezo yeTelegram olungeza ukuzilandwa kwevidiyo, phakathi kwezinye izinto ezintsha
I-Spark ye-macOS isivele isivumele ukufometha umbhalo wama-imeyili ethu
Enye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuphatha i-imeyili, iSpark, isanda kuvuselelwa ivumela umbhalo ukuthi ufomethwe.
I-Sims 2: Izindaba Zezilwane zitholakala nge-1 euro kuphela ngesikhathi esilinganiselwe
Umdlalo I-Sims 2: Izindaba Zezilwane zitholakala okwesikhashana kwi-Mac App Store ngama-euro ayi-1,09 nje, intengo ephansi kakhulu kune-21,99 evame ukuba nayo.
Sula noma iyiphi into kusuka ezithombeni zakho kalula nge-Snapheal
Ukususa izinto ezithombeni noma ukubuyisela izithombe ezindala kulula kakhulu ngohlelo lokusebenza lwe-Snapheal Mac
IDropmark isisiza ukuthi sihlele izixhumanisi zethu, izithombe, izithombe-skrini namanothi ngendlela elula kakhulu
Ukuphatha imininingwane edingekayo ukwenza iphrojekthi, umsebenzi noma ukutadisha kulula kakhulu ngenxa yohlelo lokusebenza lweDropmark.
I-Lego the Incredibles ngumdlalo ofakiwe wesonto
Ngaphandle kokungabaza, umdlalo weLEGO The Incredibles uvumela umsebenzisi ukuthi abe nesikhathi esimnandi phambi kweMac. Kulokhu, phakathi naleli sonto ngumdlalo ofakiwe
Dala izithonjana zakho nge-Icon Plus, etholakala nge-1 euro kuphela ngesikhathi esilinganiselwe
Uhlelo lokusebenza lwe-Icon Plus lutholakala okwesikhashana ngama-euro ayi-1,09 kuphela futhi lusivumela ukuthi sakhe noma yisiphi isithonjana se-Mac yethu, izinhlelo zokusebenza ...
Abathuthukisi baseYurophu ngabe benze ama-dollar ayizigidi ezingama-25.000 kuze kube manje ngenxa ye-App Store
U-Apple ubike ukuthi, ngenxa ye-App Store, abathuthukisi base-Europe ngabe bathole imali engaphezu kwezigidi ezingama-25.000 zamaRandi.
I-TweetDeck ye-Mac ivuselelwa ngokuxazulula ukusetshenziswa kwememori ngokweqile
I-TweetDeck ye-macOS ibuyekezwe ukuthi ifake ukulungiswa kwesiphazamisi esibi ebesidla kakhulu i-RAM.
ILuminar 3 isendalini yokugubha usuku lwezithandani
ILuminar 3 inikeza izaphulelo zoSuku Lwezithandani nangezinsuku ezi-5 ezizayo. Wasebenzise ngokunenzuzo lo mnikelo
I-Apple izophoqa bonke abathuthukisi ukuthi bavikele ama-akhawunti abo ngokuqinisekiswa okuyizinyathelo ezimbili
Uma une-akhawunti yonjiniyela we-Apple, bazokuphoqa ukuthi uvule ukuqinisekiswa okuzinyathelo ezimbili ukuze ugcine ama-akhawunti akho ephephile.
IPixelmator Pro ivuselelwe futhi ingaphatha izithombe ngqo kusuka ku-iPhone
IPixelmator Pro ivuselelwa ikwazi ukuphatha izithombe ngqo kusuka ku-iPhone bese ihlukanisa izithombe kumamaski phakathi kwento ingemuva
Amathuluzi we-MS Office asinikeza inani elikhulu lamathempulethi weHhovisi
Uhlelo lokusebenza lwe-Mac, i-Toolbox ye-MS Office, lwenza kutholakale inani elikhulu lamathempulethi we-Word, Excel ne-PowerPoint.
Izinhlelo Zokuthengisa ziyayeka ukusebenza ku-Mac
Uhlelo lokusebenza lokuthola izinhlelo zokusebenza zamahhala, ngezaphulelo noma ngisho nezinhlelo zokusebenza ezintsha ezivela ku-App Store lamada Apps On Sale ziyayeka ukusebenza
Izifanekiso ezingaphezu kuka-3000 zeMicrosoft Word nge-euro eyodwa kuphela
Uma ufuna izifanekiso zeMicrosoft Word, ama-Templanes we-MS Word kuyindlela enhle ongayibheka ngezifanekiso ezihlukene ezingaphezu kuka-3000.
I-WidsMob, isibukeli sesithombe esiphelele kakhulu futhi enembile
Uma ufuna enye indlela evumelekile yokubuka kuqala ukuze ujabulele izithombe zakho ozithandayo, uhlelo lweWidsMob kungaba uhlelo olufunayo.
Beka amakhono akho we-offroad ekuvivinyweni nge-Rock Crawler
Umdlalo we-Rock Crawler usinikeza uchungechunge lwezimoto zokudlulisa izivivinyo ze-4x4 kunoma yiluphi uhlobo lobuso.
I-Transitions DJ, isihleli somsindo esinamandla seMac nethuluzi elihle lama-DJs manje ongalithola mahhala
Thola i-Transitions DJ lapha, isihleli somsindo esinamandla nethuluzi elifanele lama-DJ manje atholakala okwesikhashana mahhala.
I-myTuner Radio isengenye yezinhlelo zokusebenza zomsakazo ezinhle kakhulu ze-Mac
Ku-Mac App Store sithola zonke izinhlobo zezinhlelo zokusebenza zokulalela umsakazo futhi i-myTuner Radio isengenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zalokhu
Buka izithombe zakho ngendlela ehlukile nge-Fragment
Uma ufuna uhlelo lokusebenza ukubuka izithombe zakho ozithandayo, i-Fragment ingaba uhlelo lwamahhala olifunayo.
Khipha izithombe kusuka kumavidiyo ane-SnapMotion, etholakala nge-1 euro kuphela ngesikhathi esilinganiselwe
Uma kukhulunywa ngokukhipha izithombe kumavidiyo wethu owathandayo, ama-movie noma olunye uhlobo lwento yokubukwayo, ku ...
Lezi yizinhlobo ezahlukahlukene ze-Office ezitholakalayo ze-Mac
Lezi yizinhlobo ezahlukahlukene ze-Office ezitholakalayo ze-Mac, ukukusiza ukhethe okufanela umsebenzisi ngamunye.
I-Office 365 isiyatholakala ku-Mac App Store
Inkampani yaseCupertino imemezele emahoreni ambalwa edlule ukufika kwezinhlelo zokusebenza zeHhovisi 365 eMac App Store ngokusemthethweni
I-Telegram ivuselelwa kunguqulo 4.9 ye-macOS
Uhlobo olusha olungu-4.9 luvela kubasebenzisi beTelegram kuma-macOS futhi kulesi sibuyekezo sithola ukuthuthuka okuningana okuhehayo ngokwemisebenzi
IPixelmator Pro ingeza amaski wokunquma, izilungiselelo zesendlalelo ezilungiselelwe nokunye okuningi kusibuyekezo sayo sakamuva
Ukuvuselelwa kwakamuva kwePixelmator Pro kungeza izici ezintsha ngezilungiselelo zezingqimba ezilungiselelwe namaski ukwenza ngcono ukusebenza.
Ithelegramu Ideskithophu ye-Mac ibuyekezwa ngokungeza ukusebenza kwamaqembu
Uhlelo lokusebenza lwemiyalezo yeTelegram lusanda kuvuselelwa ukwengeza izici ezintsha kuma-admins eqembu.
Yazi masinyane ukuthi ukuqokwa kwakho okulandelayo kuzoba yini noMhlangano Olandelayo
Ngenxa yesicelo seNetxt Meeting, ukwazi ukuthi ukuqokwa kwekhalenda lethu elilandelayo kuzoba yini kulula kakhulu ngoba akudingeki sisebenzisane nanoma yiluphi uhlelo lokusebenza.
Uhlelo lokusebenza oluthandekayo nolusha lokuthatha amanothi ku-Mac. Kwenziwe: Amanothi, irekhoda yezwi
Uhlelo olusha lokuthatha amanothi nokuqopha umsindo lufikile kwi-Mac App Store ebizwa nge-Noted: Notes, irekhoda yezwi lapho kuzoba lula khona ukuthatha amanothi
I-Apple ikhipha inguqulo engu-10.4.5 ye-Final Cut Pro X ngokuthuthuka kokusebenza nokuqina
I-Apple ikhipha inguqulo engu-10.4.5 ye-Final Cut Pro X ngokuthuthuka kokusebenza nokuqina. IFinal Cut Pro X iyahambisana nanoma iyiphi iMac
Dala amakhadi akho ebhizinisi nge-InstaCard
Uma ufuna ukudala amakhadi wakho webhizinisi, ngohlelo lwe-InstaCard for Mac kungenzeka ukwenze kalula.
Guqula izithombe eziyizicaba zibe izinto ze-3D nge-Easy 3D Scan
Ukwakha izithombe ze-3D zamakhathalogi noma izitolo eziku-inthanethi kuyinqubo elula kakhulu ngohlelo lwe-Easy 3D Scan, futhi ingeza ukuhlanganisa ukukwazi ukuthengisa imikhiqizo yethu
Phatha iPhillips Hue kusuka kwi-Mac yakho nge-Hue-topia
Uma ufuna ukuzuza kakhulu kuma-Phillips Hue bulbs akho ngenxa yohlelo lwe-Hue-topia Mac kungenzeka
Dala amakhathalogi amangalisayo ngezifanekiso zeKhathalogi, mahhala isikhathi esilinganiselwe
Izifanekiso zeKhathalogu zisinikeza izifanekiso ezingama-40 esingadala ngazo amakhathalogi amnandi ukuthengisa imikhiqizo noma izinsiza zethu ngendlela ebonakalayo.
Guqula phakathi kwamafomethi ahlukene ngokushesha futhi kalula nge-File Converter
Ngenxa yohlelo lweFayile Converter, singaguqula phakathi kwamafomethi ahlukene ngokushesha futhi kalula.
Qopha konke okuboniswa kusikrini sakho se-Mac nge-Screencast
I-Screencast uhlelo lokusebenza olulula olusivumela ukuthi siqophe konke okuboniswa kusikrini sethu se-Mac mahhala.
Umbala weTweak, gqamisa imininingwane yombala wezithombe zakho
Ngalolu hlelo lokusebenza olusha uzokwenza zonke izithombe zakho zigqame ngandlela thile ngenxa yokuthi kungenzeka kungezwe umbala ezingxenyeni zalo
Thuthukisa isipiliyoni se-AirPod kuma-macOS ngohlelo lokusebenza lweToothFairy
Thuthukisa isipiliyoni se-AirPods ku-macOS ngohlelo lokusebenza lweToothFairy. Uhlelo lokusebenza lubhekene nokwenza lula inqubo yokuxhuma.
I-Apple igubha iminyaka engu-15 ye-GarageBand ngeSonto lesi-6
I-Apple izogubha iminyaka engu-15 ye-GarageBand ngeSonto mhlaka 6. Kusukela u-Apple enze ukulandelana okubalulekile kwempilo yesicelo.
AmaViking - Izimpisi ZaseMidgard, umdlalo ohlanganisa izinganekwane nomlando ngokuthinta izinganekwane
AmaViking - Izimpisi zeMidgard zisinikeza indaba yoqobo ehlanganisa izinganekwane nomlando ngokuthinta inganekwane yangempela.
iSnapShot, enye indlela yokuthatha izithombe-skrini ku-Mac
Uma indlela nokuhlela okulandelayo okusinikeza i-macOS ngokwendabuko kungakukholisi, uhlelo lokusebenza lwe-iSnapshot kungaba uhlelo olufunayo.
I-Telegram ifinyelela ku-4.8 yayo ngocwaningo nezinye izindaba
I-Enpass ibuyekezelwa kunguqulo 6 ngezindaba ezibalulekile
I-Enpass ibuyekezelwa kunguqulo 6 enezici ezintsha ezibalulekile. Imodi emnyama nezindaba eziningi, ikakhulukazi ezigxile ekuvikelekeni kwephasiwedi
Ukuphakanyiswa kweTomb Raider kutholakala ngama-euro angu-21,99 kuphela
Umdlalo wakamuva kwi-Tomb Raider franchise uyatholakala ku-Mac App Store ngesaphulelo se-10 euro ngentengo ejwayelekile.
Yenza izibalo zezibalo zanoma yikuphi ukubanzima nge-Fractions Pro
Uma ufuna uhlelo lokwenza izibalo ngendlela yemidwebo, ama-Fractions Pro wuhlelo oludingayo.
vGuru Video Player, itholakala nge-1 euro kuphela
Uma ufuna enye i-VLC, ungasebenzisa ngokunenzuzo isephulelo esinikezwa uhlelo lokusebenza lwe-vGuru, isicelo sokuthi ngesikhathi esilinganiselwe singathenga ama-euro ayi-1,09 kuphela
Dala ukuncenceza kwe-iPhone yakho, noma enye i-smartphone nge-Ringtone Maker Pro
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Ringtone Creator Pro singakha ukuncenceza kwe-smartphone yethu ngendlela elula kakhulu futhi esheshayo.
I-Fantastic 2 itholakala ngentengo uhhafu wesikhathi esilinganiselwe
I-Fantastic 2 ye-Mac, iyatholakala ngentengo engaphansi, okunikelwayo ukuthi uma ubuyilindile akufanele uphuthelwe.
I-Acorn 6 Image Editor, uhlelo lokusebenza oluphelele lokuhlela isithombe
Ku-Mac App Store sithola inqwaba yezicelo ezisisiza ukuthi sihlele izithombe nakule ...
Shesha i-Xcode, ikuvumela ukuthi uguqule ikhodi yakho ye-Obective-C ibe yi-Swift 4.1 noma i-4.1 ngokuchofoza okukodwa
Isihleli sesithombe se-PhotoScape X sibuyekezwa ngezici ezintsha ezibalulekile
Isihleli sesithombe se-PhotoScape X sibuyekezwa ngezinto ezintsha ezibalulekile maqondana nezihlungi, amaphuzu alula kanye nokwenza ngcono imisebenzi yamanje
I-FX Photo Studio Pro, thatha izithombe zakho ziye kwelinye izinga ngalolu hlelo lokusebenza
Yazi futhi uphathe izinsiza zakho ze-Mac nge-iStat Menus
Noma nini lapho iMac yethu iqala ukuxhuga, kungaba ngezikhathi ezithile noma njalo, siqala ukunikeza ...
Sayina amadokhumenti e-PDF nokunye okuningi nge-Tiny PDF Editor
Ngenxa yesicelo se-Tiny PDF Editor singasayina noma sichaze noma yiliphi ifayela ngefomethi ye-PDF
Hlukanisa amafayela amakhulu abe amancane nge-Split
Ukuhlukanisa amafayela ube mincane kungumsebenzi olula kakhulu ngenxa yohlelo lweSplit lweMac.
Guqula amafayela alalelwayo kunoma iyiphi ifomethi nge-MP3 Converter Pro
Ngenxa yohlelo lokusebenza lweMP3 Converter Pro singaguqula amafayela alalelwayo kunoma iyiphi ifomethi ngokushesha futhi kalula.
I-Apple izonikeza ukuthenga ngaphakathi kwezicelo ze-App Store kubangani nomndeni
Ngokushesha i-Apple izovumela ukunika abanye abasebenzisi ukuthenga ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza (ngaphakathi nohlelo) kusuka ku-App Store. Yithole lapha!
I-Fileloupe - Isiphequluli Semidiya, isiphequluli sefayela le-multimedia okufanele usikhumbule
I-Fileloupe iyi-explorer yefayela enhle kakhulu eyenzelwe amafayela we-multimedia.
Hlanganisa amafayela amaningi e-PDF abe munye ne-Multiple PDF Merge, manje eshibhile
Thola lapha ukuthi ungawahlanganisa kanjani amafayela amaningi e-PDF abe munye usebenzisa i-Multiple PDF Merge application for Mac, ehlisiwe ku-Mac App Store.
Khiqiza amabhakhodi akho nge-Barcode Basics
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Barcode Basics, singakha ngokushesha futhi kalula ama-barcode ukuphatha i-inventory yethu, hlola izici ...
Yakha amakhadikhadi akho kaKhisimusi nge-Happy Holidaze
Uma ufuna ukuklama ikhadi lakho lokuposa likaKhisimusi, ngenxa kaHappy Holidaze ungakwenza ngokushesha futhi kalula.
I-Ajenda, isicelo sokwenza ngcono ukukhiqiza ngamanothi ethu